काठमाडौंमा भेटीए ६ वर्षयताकै उच्च डेंगु संक्रमित, बिवरण सहित , यस्ताछन् लक्षण र बच्ने उपाए - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home प्रदेश काठमाडौंमा भेटीए ६ वर्षयताकै उच्च डेंगु संक्रमित, बिवरण सहित , यस्ताछन् लक्षण र बच्ने उपाए
काठमाडौंमा भेटीए ६ वर्षयताकै उच्च डेंगु संक्रमित, बिवरण सहित , यस्ताछन् लक्षण र बच्ने उपाए
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: २३ भाद्र २०७६, सोमबार २१:०८
काठमाडौं, २३ भदाै २०७६ ।
राजधानी काठमाडौंमा झनै डेंगु रोगको त्रास फैलिएको छ । ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी डेंगु रोगका बिरामी भेटिएपछि राजधानीमा डेंगु रोगको त्रास फैलिएको हो ।राजधानी बाहिरकेही महिना अघिदेखि नै डेंगुको संक्रमण फैलँदा पनि सरकारले रोकथाम गर्न सकिरहेको छैन । आइतबार एकैदिन राजधानीमा ३६३ जनाको डेंगु परीक्षण गराइएकोमा १९४ जनामा डेंगु रोग फेला परेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका सूचना अधिकृत रुपनारायण खतिवडाले बताउनु भयाे । त्यस्तै,भदाै २१ गते शनिबार २९६ जनाको परीक्षण गराएकोमा १४४ जनामा डेंगु रोगको संक्रमण फेला परेको थियो । दैनिक ४ सयजना भन्दा बढी बिरामी डेंगु रोगको परीक्षण गराउन आएकामा भदौ १५ यता आधा बिरामीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेको उपचारमा संलग्न टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनकाे भनाइ छ । गत बैशाखदेखि साउनसम्म ५२८ जना बिरामीमा डेंगुको परीक्षण गरिएकोमा ८५ जनामा डेंगु फेला परेको सूचना अधिकृत रुपनारायण खतिवडाले बताउनु भयाे । भदौयता राजधानीमा डेंगुको चाप ह्वात्तै बढेको उहाले बताउनु भयाे । भदौ १ गतेदेखि २२ गतेसम्म २ हजार ६८० जनामा डेंगु परीक्षण गरिएकोमा ४६ प्रतिशत बिरामी अर्थात १२ सय भन्दा बढीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेकाे खतिवडाकाे भनाइ छ । डेंगु रोगका सबै संक्रमित बिरामीहरु अस्पताल भर्ना नहुने उहाँले बताउनु भयाे । भर्ना भएका मध्ये १२९ जना बिरामी उपचार गराएर घर फर्किसकेको र २३ जना बिरामी अहिले पनि अस्पतालै रहेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयाे। अन्यलाई घरमा नै आराम गरेर नियमित औषधी खाना सल्लाह दिएर पठाइएको खतिवडाकाे भनाइ छ । टेकु अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार राजधानीमा ०७०/७१ मा ६० जनामा डेंगु देखिएको थियो । ०७१/७२ मा ५८ जनामा डेंगुको संक्रमण पाइएको थियो भने ०७२/०७३ मा २२ जनामा यो रोग देखा परेको थियो । त्यस्तै ०७३/७४ मा १४० जना र ०७४/७५ मा २५३ जना डेंगु रोगी फेला परेका थिए । तर ०७५/७६ को पाँच महिनामा ६ वर्षयताकै डेंगुका बिरामीको तथ्याङ्कलाई उछिनिसकेको खतिवडाले जानकारी गराउनु भयाे । भदौ १५ गतेदेखि यता बिरामीको चापलाई नियाल्दा डेंगु रोगका बिरामीहरु अझै बढ्ने उहाकाे अनुमान छ ।बैशाखको अन्तिम सातादेखि नै देशका विभिन्न भागमा देखा परेको डेंगु रोगको त्रास राजधानीमा पनि फैलिएपछि अस्पतालमा मानिसहरुको भीड लागेको छ । दैनिक ४ सयभन्दा बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनले आधा बिरामीमा डेंगु रोगको संक्रमण फेला परेको बताउनु भयाे । उपत्यकाको डल्लु, असन, जैसीदेवल लगायतका स्थानबाट आउने विरामीमा डेंगु रोगको संक्रमण देखा पर्नुकासाथै दिनभरि नै बिरामीको चाप एकैनास हुने गरेको डा. पुनले जानकारी गराउनु भयाे । डेंगुबाट सर्वसाधारण मात्र हैन डेंगु रोगका बिरामीको उपचार गराउँदै आएका टेकु अस्पतालका चिकित्सकसहित १२ जना कर्मचारी समेत संक्रमित हुनुभएकाे छ । टेकु अस्पतालका कन्सलटेन्ट फिजिसियन एक जना र मेडिकल अफिसर दुईजना सहित १२ कर्मचारीमा डेंगुको संक्रमण देखा परेको छ । संक्रमित ६ जना कर्मचारी उपचारपछि काममा फर्किसके पनि ६ जना भने अझै आराम गरिरहेकाे बताइएकाे छ । डेंगु संक्रमितकाे संख्यालाइ मध्यनजर गरी अस्पतालले २ वटा ज्वरो क्लिनिक अर्थात ‘ज्वरो डेक्स’समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ , ज्वरो आएर उपचार गराउन आउने बिरामीलाई उपचारमा सहजताका लागि हेल्प डेक्सका रुपमा ज्वरो डेक्स सञ्चालनमा ल्याएको हाे । बिरामीको अत्यधीक चाप बढेपछि ओपीडी कक्षसमेत थप गरिएको साथै डेंगु रोगको पहिचान भएका बिरामीलाई उपचारमा सहजता ल्याउन महिला वार्ड र पुरुष वार्डको व्यवस्था गरिएको र उपचार गराइरहेका बिरामीलाई अस्पतालले झुलको व्यवस्था गरेर छुट्टाछुट्टै वार्डमा राखेको डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयाे ।
डेंगु रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ
डेंगु रोगबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, लामखुट्टेबाट रोग सर्ने भएकाले घर वरपर खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न दिन नहुने र लामखुट्टे काे टाेकाइबाट बच्नुनै डेंगु रोगबाट बच्ने सर्वाेत्तम उपाय भएकाे चिकित्सकहरुको सुझाब छ ।
यी हुन डेंगुका लक्षण
ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा मसिना बिमिरा आउने, शरीरको पछाडिको भाग दुख्नेलगायतका लक्षण डेंगु राेगकाे हाे।
यस्ता लक्षण देखिए तुरून्त स्वाथ्य परिक्षण गराउन चिकित्सकहरुले अनुराेध गर्नुभएकाे छ ।
भन्सार कार्यालयमा समातियाे एक किलाे सुन, मसला पिस्ने ओखलपनी छाेडेनन् तस्करले
विश्वकै सस्ता गन्तव्यकाे सुचिमा पर्याे नेपाल, प्राकृतिक स्रोतमा भने विश्वमै ३३ औँ स्थानमा